Banyere anyị - Carl Henry Global
Enwere m ndụ m niile, ebe ọ bụ na m bụ 12 afọ, na-ewu ụlọ ọrụ na-enweta ego ego dị ka onye ahia karịa onye ọrụ. Kemgbe 1st nke July 1978, arụsiwo m ọrụ ike ịnọgide "enweghị ọrụ".
Enwebeghị m ịkwụsị ịmụ ụzọ ahịa ahịa ọhụrụ na ịchọta ọrụ dịgasị iche iche, iji chọpụta ebe enwere ike ị nweta ego, na nchịkọta nke m.
Na njedebe ikpeazụ, arụwo m ọrụ na 39 ọrụ
Anyị na-akpọ azụmahịa anyị Carl Henry Global sa. Nke ahụ nwere ọtụtụ nkewa na ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ n'ịntanetị gburugburu ụwa, anyị nwekwara ụlọ ọrụ ndị na-adabere n'ọtụtụ mba.
A na-ejikọta akụkụ ndị isi nke azụmahịa anya n'okpuru isiokwu 5; Finance, Ahịa ịre ụlọ (Ngwongwo), Internet (Digital Marketing), ụlọọrụ na si ebi ndụ. E nwere ike ịchebe ndụ na azụmahịa niile n'okpuru isiokwu 5 a.
Ebumnuche anyị bụ mgbe niile ịmepụta nzukọ zuru oke nke onwe ya nke nwere nkà na ihe niile a chọrọ iji malite, nkwado, jikwaa ma nye ahịa ahịa n'ịntanetị n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị azụmahịa ọ bụla ma ọ bụ ọrụ, karịsịa ma ọ bụrụ na ọ nwere nnukwu ọnụọgụ ahịa ịntanetị .
Dịka akụkụ nke azụmahịa anyị, anyị kpebiri
iji nyere ndị ọzọ aka Ọzụzụ na azụmahịa
Anyị na-ebipụ mkpuchi niile nke ikwusa ozi ọma na ịnụ ọkụ n'obi ụgha ma gbasaa ozi ị chọrọ, iji mee ihe ozugbo ị ga - eji "Right Now" iji mee mgbanwe ná ndụ gị iji mee ka ị dịrị n'ọnọdụ na ibi ndụ ebe i chere obi ụtọ ịbụ.
Ntọala maka ihe a nile bu inwe ike ime ego n'ụzọ na-akwado ụdị ndụ ị chọrọ; ekwu na ọ bụrụ na ị nwere ike ime ka agụụ mmekọahụ gị ma ọ bụ ihe ntụrụndụ bụrụ isi iyi nke ego gị, ị gaghị 'arụ ọrụ' ụbọchị ọzọ ná ndụ gị!